Usoro na ọnọdụ | Best Way to whiten Ezé Guide
Mmadụ Bịa ka anyị na saịtị. Ọ bụrụ na ị nọgide na-agagharị na-eji nke a website ị na-ekwere ime ihe kwekọrọ na-agbụ na-esonụ usoro na ọnọdụ nke eji, nke ọnụ na anyị na iwu nzuzo na-achịkwa anyị na saịtị ahụ na-eji gị na mmekọrita a website.
Okwu anyị na saịtị ma ọ bụ 'anyị’ ma ọ bụ 'anyị’ na-ezo aka onye nwe website. Okwu 'ị’ -ezo ka onye ọrụ ma ọ bụ onye nkiri nke anyị website. The ojiji nke a website bụ isiokwu na-esonụ usoro ojiji:
Ọdịnaya nke peeji nke a website bụ maka gị n'ozuzu ọmụma na ojiji naanị. Ọ bụ isiokwu ịgbanwe-enweghị amamọkwa.
Ma anyị ma ndị bụla ọzọ na-enye akwụkwọ ikike ọ bụla ma ọ bụ nkwa dị ka ndị ziri ezi, timeliness, arụmọrụ, ihe zuru ezu ma ọ bụ kwesịrị ekwesị nke ozi na ihe hụrụ ma ọ bụ awa na nke a website maka ihe ọ bụla akpan akpan nzube. Ị na-ekweta na ndị dị otú ahụ ọmụma na ihe nwere ike ịnwe-adabaghị ma ọ bụ njehie na anyị expressly ewepu ibu ọ bụla dị otú ahụ adabaghị ma ọ bụ njehie ka ihe ruo n'ókè ka iwu.
Ojiji nke ozi ọ bụla ma ọ bụ ihe a na website kpamkpam na gị onwe gị n'ihe ize ndụ, n'ihi na nke anyị agaghi-atụba. O gēru kwa, i kwesịrị ịrụrụ ọrụ iji hụ na ihe ọ bụla na ngwaahịa, ọrụ ma ọ bụ ozi dị site na nke a website izute gị chọrọ kpọmkwem iji.
Nke a website nwere ihe onwunwe nke a na-ekesịpde site ma ọ bụ ikikere anyị. Nke a ihe na-agụnye, ma ọ bụghị nanị, imewe, okirikiri nhọrọ ukwuu, anya, n'ile anya na ndịna. Mmeputakwa bụ ihe amachibidoro ọzọ karịa dị na nwebisiinka mara, bụ ndị so n'ime ndị a usoro na ọnọdụ.
All ụghalaahịa mepụtagharị a website, nke ndị onwunwe nke, ma ọ bụ ikikere na ọrụ, na-kwetara na website.
N'enweghị ikike ojiji nke a website wee nye ịrị elu a na-ekwu maka emebi obosara na / ma ọ bụrụ mpụ iwe.
Site n'oge ruo n'oge a website pụkwara ịgụnye njikọ ndị ọzọ na weebụsaịtị. Ndị a njikọ na-nyere gị mma iji nye ihe ọmụma. Ha adịghị egosi na anyị na-akwado ụdị ndị website(s). Anyị enweghị ọrụ maka ọdịnaya nke jikọtara website(s).
Ị nwere ike ghara ike a njikọ ka a website n'ebe ibe website ma ọ bụ akwụkwọ na-enweghị anyị na saịtị ahụ tupu e dere nkwenye.